Nano impahla - Changzhou longxin Machinery Co., Ltd
Nano materials izinto ube ubukhulu okungenani oyedwa (0.1-100 NM) esikhaleni ngakuthathu noma akhiwe kubo njengoba Izingxenye eziyisisekelo, okuyizinto cishe okulingana usayizi 10 ~ 100 ama-athomu eduze wahlela ndawonye.
It kungenziwa izigaba ezine: nano luthuli, nano fibre, nano ifilimu kanye nano block. Isikhathi ukuthuthukiswa nano powder ende futhi ubuchwepheshe iyona avuthiwe kakhulu, okuyinto ngesisekelo ezinye izinhlobo ezintathu imikhiqizo. Ucwaningo theory eyisisekelo ye-nanotechnology kanye nokuthuthukiswa izinto ezintsha eziye zasungulwa ngokushesha, futhi ziye kabanzi ngezinto zesintu, imishini kwezokwelapha, izimpahla ezisebenza ngogesi, ezinengilazi kanye nezinye izimboni.
Ncoma nemishini ukukhiqiza umkhiqizo nano impahla: ES / DS abahle eqondile ezintathu roller esigayweni, DYS uchungechunge wokubacindezela ezintathu roller esigayweni, WSP Series Fast Flow sobuhlalo Mill, WST uchungechunge Turbo nano isihlabathi isigayo
umugqa yomkhiqizo: Nano impahla ezimanzi ukugaya umkhiqizo umugqa